Yaa qaadaya mas'uuliyadda halista xooggan ee ka iman karta heshiiska shidaalka? - Caasimada Online
Home Warar Yaa qaadaya mas’uuliyadda halista xooggan ee ka iman karta heshiiska shidaalka?
Inta badan bulshada Soomaaliyeed iyo warbaahinta dalka kuma baraarugsana halista weyn ee ku gadaaman kheyraadka dabiiciga ah ee dalkeenna, gaar ahaan shidaalka. dhowaan waxaa jiray heshiis toddobo xirmo loogu saxiixay Coastline Exploration oo ah shirkad ka shaqeyneysay sahminta shidaalka Soomaaliya, gaar ahaan biyaha fog ee badda. Shirkaddan oo horay loo oran jiray Soma Oil And Gas waxaa la aas-aasay sanadkii 2013-kii, laakiin, magacii ayaa laga bedelay 2018-dii.
Bishii December 2020-kii waxa uu shir ka dhacay dalka Turkiga, waxaa shirkaas ka qeyb-galay shan xubnood oo ka socday wasaaradda Betroolka iyo madax ka socotay Hey’adda shidaalka ee Soomaaliya (Somali Petrol Authority- SPA). sida ay ii sheegeen dad shirka ka qeyb-galay oo diiday in aan magacooda xigto, wasiirku qorshaha kuma jirin in uu shirkaasi yimaado, laakiin, waxa uu tegay Turkiga, kadibna waxa uu xubnihii Soomaaliya ka socday ee shirka joogay u sheegay in uu saxiixayo heshiis, arrintaasi waxaa ka dhashay khilaaf ugu dembeyn sababay in Soomaaliya lagusoo laabto, iyada oo aan wax is-af-garad ah la gaarin.
1- Maxaa qasbay in wasiirku uu saxiixo heshiiskan oo horay looga baaqsaday in Muqdisho lagu saxiixo?
2- Wasiirka ma keligii ayaa arrintaan ku dhaqaaqay, mise sida uu sheegay mas’uuliyiin ka sarreysay ayaa arrintaan ku lug yeelan kara?— Haddii uu jiro mas’uul amray ma jiraan cadeymo qoraal ah oo la hayo?
3- Haddii loo baahdo in dad xilal sare haya su’aaalo la weydiiyo, suura-gal ma tahay in madaxweyne Farmaajo uu dhankiisa wax aan aheyn beeninta hadalkii wasiirka uu miiska soo saari karo?
4- Heshiiska la saxiixay culeys intee la’eg ayuu dalka ku yeelan karaa sharci ahaan, ganacsi ahaan iyo siyaasad ahaanba?
5- Su’aalaha weydiinta xeer-ilaalinta maxaa daba socon kara oo lagu qancin karaa dadweynaha Soomaaliyeed?
*In qof walba uu ku dhiirran in uu ku takrifalo awoodda dowladeed ee uu hayo & kheyraadka dalka.
*Ama in laga fogaado wax walba oo qatar ku ah Qarankaan dib u dhismaya ee la tiicaya dhibaatooyinka amni, dhaqaale iyo siyaasadeed.
Si kooban xeer-ilaalinta Soomaaliya waxaa la dhowrayaa sida ay ula macaamilaan kiiskaan oo ay indhaha ku hayaan bulshada Soomaaliyeed, kaas oo ah hal-xiraale la dhowrayo sida ay u furaan!